Warqad ku Citizen Buubaa: Reaction Dousing in Koronto Pricing (2)
Beetle, waxaa muhiim ah in aad in la aqoonsado in MYTO ah, on hordhac, yimaadeen oo ay weheliyaan kab dowladeed ee heerarka for gabal ugu hooseeya (dhaqan-dhaqaale) ee macaamiisha, Dadka deegaanka ah 1 (R1) category. Sida "kabidda ma tagaan socon weligiis", tani waa laga saari doonaa bartamaha 2014, isagoo siiyay qol ku filan sixitaanka dadka ayaa waxa ganacsiga gaarka suuqa korontada kaxayn waxay keentaa.
Korontada Regulatory Commission The Nigerian ama NERC waxaa straddled la mas'uul ka ah go'aaminta waxa la bixinayaa biilka by macaamiisha korontada, kuwaas oo aan shirkadaha korontada awood qaybinta gaar ah loo maamulo ama Wadayaasha Qaybinta Network (DNO). Canshuuraha ayaa ka MYTO ma isku mid ah DNOs dhan.
Citizen Buubaa, filan intii ka sii weynaydba ah (inkastoo loo dhayalsaday,) dhaqdhaqaaqa heerka korontada sidii markii on aado. Waa arrin cad in canshuuraha NERC ee, daabacay June 2012, in labada mas'uul tamarta iyo kharash la socda go'an bil kasta adeeg, ee qaybaha kala duwan ee macaamiisha, wax yar kor u kacay sanad walba. Sida ku cad nidaamka canshuur Nigeria ee, Qiimaha korontada dib loo eegaa shan sano walba, si ay u sameeyaan u habayn iyo in la xaqiijiyo soo kabsashada kharashka maal ah. Waxaan ahay arrin digtoonaada aan tartan la record ka jabay (ma cel celinta) in ka badan farta ku fiiqaya sababo qaarkood ee heerka korodhka (xitaa haddii loo dhayalsaday,) hawo isagoo ka mid ah gaar waaxda awoodda, tan iyo markii aan horay u sababaysan weheliyaan line this.
Ma arko heerka korontada kacaya in la kulmeyso dibad dadweynaha, socda ay ku hayeen ku-xigeen sida NERC ee binta, iyo miyir dowlada ee wax ku reebtay saamayn aan fiicnayn, xitaa halkaas oo gobolka rabshadaas ee soo socda ku adkaystaan:
Sahayda Gas (Hoos u siin gaas si ay dhirta jiilka ka dhigaysa xukuumadda Itobiya awood suuxdin); load masaakiinta qoondeynta laba DNO (tani waxay ku saleysan tahay boqolkiiba wadarta jiilka tamarta ee dalka. Maadaama aan qori, Shirkadaha qaybinta xitaa heleen wax ka yar boqolkiiba ee loo qoondeeyey); iibsatay qayb weyn korontada (qaar ka mid ah DNOs joogto ah awoodda 'liicdo' si aad u iibsato qayb weyn korontada laga suuqa korontada, si ay u iibiso heerka tafaariiqda si loo soo afjaro users); sidoo kale qaar ka mid ah DNOs hadda muujinaya calaamadaha hore ee 'daal dhaqaale', Halkan ka liso post-gaar 'nooc dhaqaale' halis ah - milicsiga A ee aan awoodin in ay la qabsadaan kharashka hawlgalka, duro of lacagaha dayactirka kaabayaasha iyo ballaarinta.
Waxaan idinku boorinayaa in aan si guud u eegno waxa Nigeria waajahdo hadda – Awoodda dhalinayey rakibnay in Geeri agagaarka 9000mw; awoodda waxtar leh la heli karo aan ka badnayn 5,000mw; iyo baahida dalka ee hadda lagu qiyaasay ku saabsan 16,000mw. Xaaladdan ayaa waxa ka fog, waxa aan ka suulka iyo sanaaduuq uu ku saabsan. Si kastaba ha ahaatee, gaadhsiiya halka aan jeclahay oo dhammu wax ka badan oo habeenkii ma aha, laakiin waxay ku lug leedahay dhaqdhaqaaq farabadan habka ku salaysan in hubaal dhali doono natiijo wanaagsan ka dib.
Beetle, shakiga uu ka qabo binta ma aha in aad iska dhigay si buuxda, ama aad ka maqnaan doona on waxa soo shaac hawlaha ee dhalidda qaybta waqti yar ka. My soo socda, iyo saddexaad, horyaalka ee taxanahan on koronto qaybinta marketing ee Nigeria, "Gold in waaxda awoodda" caawisaa saarto qolfo leh qaar ka mid off indhihiinna.
Waxaan nuujiso dareen ah in Buubaa ayaa weli rukhso (ka dib 'naxwaha dheer oo dhan') waxa la qabto si loo douse saameynta ay kordheen binta korontada on ratepayers.
Ma dhacday in aad in caadiga ah Nigerian ah u gubtaa korontada, marka la heli karo, ma xusuusto in badan oo la badbaadiyey iyada oo hoos u isticmaalka? Waxaan ka shakisan tahay waa goobta caadi ah in aad jawi in ay leeyihiin qaar ka mid ah nalalka korontada (wax-u laydhka amniga dhismayaasha) isagoo weligoodba on, xitaa at duhurnimadda-. Sidaas oo kale ayaa heysta run ah noocyada kale ee isticmaalka qayrul awoodda. Kuwa raaxeysan in sida inta badan kuwa loudest qaylin waa markii 'qashinka' biilasha korontada inuu ku sii negaado heerka ay dooni. Kuwani waxay ka kooban qaybta macaamiisha oo wax la baro waa ku saabsan tallaabooyinka ay ahaayeen falalka sida laga damiyo korontada, nalalka, ama telefishanka marka aad dhigtay aan la isticmaalo; beddelo si isticmaalaya nalalka florescent isafgaradka; ma dhaqo dharka fiidkii, iwm.
Wax yar ka dib dhacay buuq la joogo dadweynaha ee mitir ayaa loo aqoon saday by DNOs ah, Waxaana ku boorinayaa in 'ku dhacay wadada' on Demand-Side-Management (DSM) Barnaamij - DNOs waa in aan la toy ama ka xumaan doonaan. Sida maldahan u sheegay in horyaalka hore, DSM waa waxbarasho ee macaamiisha ay biilasha ku saabsan sida loo maareeyo baahida korontada iyo load. Marka la soo koobo, DSM bixisaa talooyin iyo Aragti u ah macaamiisha ku saabsan sida loo jaray on isticmaalka (si loo badbaadiyo qiimaha tamarta, iyo ugu dambeyntii badbaadiyo lacag).
Waxaan xirmo aragti ah (oo ay ku jirto xitaa istaraatijiyad ololaha dadweynaha) on this, taas oo caddaynaya sida qalabka iyo dhiiri galinta macaamiisha tamar kaydsiga (e.g. binta peak) kicin kara danta ka mid Nigeria oo ku saabsan sida loo badbaadiyo u xoogga. Beetle, ma jiraan wax Sixir oo ku saabsan. Jarida isticmaalka 'aan loo baahnayn koronto' waa bet ugu wanaagsan ee dousing saameynta ay kordheen binta korontada.
Sida dadka ma bedesho sida ugu dhakhsaha badan ay deegaanka, waxaa jira faa'iido ah ma isagoo sheegay in waxbarashada macaamiisha intensive, Nigeria Dhab bedeli doonaa waxa amarka cusub portends. Ha noo dhinaca wanaagsan, Niemooyinka hana aaraa'da muhiim ah – Had iyo jeer uraya jiir halka baranbaro loo arki karaa dhulsocotada dhan ku kor fidiyeen meeshii.
Inkastoo aan dooran inuu sii bixiye xal waxtar leh markii aan u yeedho sidii la taliyaha in marketing, Waxaan jeclaan lahaa adiga iyo qoyskaaga si fiican aad, iyo talin in aad waa in had iyo jeer sii muwaaddin fiican oo dalka ka weyn.
1 Comment on "Warqad ku Citizen Buubaa: Reaction Dousing in Koronto Pricing (2)"